MyYappyDog: Yemagariro CRM yeReal Estate Agents | Martech Zone
MyYappyDog: Yemagariro CRM yeReal Estate Agents
China, Gumiguru 2, 2014 China, June 18, 2015 Douglas Karr
Iko kutanga kutsva kuri kuwana kumwe kuibata muIndipolis ne Real Estate Agents, uye inodaidzwa Yangu Yappy Imbwa. Kana iwe uchigona kusanganisa yakafa yakapfava yekutaurirana chikuva neasina-maturo evatengi hukama manejimendi manejimendi, une Social CRM inonzi Yangu Yappy Imbwa.
Vatatu kubva pa3 evatengesi venzvimbo vevatengesi vakati vaizoita bhizinesi zvakare nemumiririri wavo, asi chete 4% vanoita! Dawn Schnaiter, Co-Muvambi we Yangu Yappy Imbwa.
Kana vamiririri vaingova nemutengo unodhura uye wakapusa wekuchengetedza kusangana nevatengi vavo, vangave varipo kana vanhu ivavo vatamiswa, vakura kuita imba hombe, kana kana mhuri kana shamwari dziri kutsvaga kutengesa. Zvese zvinofanirwa kuitwa nemumiririri kubata pasi nguva nenguva… uye Yangu Yappy Imbwa ngatiitei izvozvo.
The Yemagariro CRM chikuva inoratidzira kugona kutumira kune ako ese masocial chiteshi, yekudyidzana inbox yekugamuchira mifananidzo, kugona kutumira uye kuyera huwandu hweemail mishandirapamwe, uye zvemukati maneja. Kubatana kunogona kuitwa nekushandisa account yemubatsiri (pasina muripo wekuwedzera) pamwe nemvumo yemushandisi pane zvavanogona uye zvavasingakwanise kuona. Uye kupfuura zvese, kupa chirevo pane chako chiitiko, kutengesa uye mari zvinosanganisirwa!
Iko kugona kweCRM kwakakura, kuchikubvumidza iwe kuratidzira akakosha vatengi uye kuronga mabasa ekutaurirana navo nguva nenguva.
Yemagariro Media Inbox
Zvinangwa uye Mari
Sezvo nekutangisa kukuru kukuru, Yangu Yappy Imbwa yakavambwa mumwe munhu anga aine chaaida - Dawn the Real Estate Mumiriri - Riann Stroud - maneja wechigadzirwa uyo akaisa pamwechete chikuva! Ini ndinoda matangiro akavakwa nekuti vashandisi vakashungurudzika kuti pakanga pasina mhinduro yaiwanikwa.
Yangu Yappy Imbwa inopa yega, timu uye bhizinesi Pricing!
Cherechedza: The Yangu Yappy Imbwa chikuva chakanyatso kukwana kune chero kontrakta kana mupi webasa ... neiyo interface yatove inogoneka.
Tags: Email Marketingchinyarwomushavashandi vebasamagariro crmhukama hwevatengi hukama manejimendimagariro inboxmuparidzi wemagariro
Chii chinonzi Viral Kushambadzira? Mimwe Mienzaniso uye Nei Vakashanda (kana Vasina)
Heano Maitiro Ekuti Iwe Usapisirwe neInfluencer Kushambadzira